Rayson | umatilasi womsekeli ongemuva
Kuze kube manje, uRayson usephase isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe ngamazwe. Yonke imikhiqizo kuhlanganisa nomkhiqizo wethu omusha ihlinzekwa ngomklamo omusha, ikhwalithi eqinisekisiwe, nezintengo ezincintisanayo. Ngemva kweminyaka yokuthuthuka, sesisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni wonke. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile ezimpahleni ezilethiwe. Samukela ngobuqotho imibuzo yakho kanye nocingo. Ngemigqa yokukhiqiza ephelele nabasebenzi abanolwazi, uRayson angakwazi ukuklama, ukuthuthukisa, ukwenza, nokuhlola yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo ngokuzimela. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazogada inqubo ngayinye ukuze baqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufike ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Sithembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende iphephile futhi iphilile. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi okwengeziwe mayelana yethu, sishayele ngqo. Kusukela yasungulwa, iRayson ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule eyethu i-R&D isikhungo sokuklama umkhiqizo nokuthuthukiswa komkhiqizo. Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuze siqinisekise ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma idlula lokho okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa kumakhasimende emhlabeni wonke. Amakhasimende afuna ukwazi okwengeziwe ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, mane asithinte.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile nesheshayo, uRayson ukhule waba ngelinye lamabhizinisi angochwepheshe futhi anethonya eChina. Umatilasi womsekeli wangemuva Namuhla, uRayson uklelisa phezulu njengomhlinzeki oqeqeshiwe nonolwazi embonini. Singaklama, sithuthukise, senze, futhi sidayise uchungechunge oluhlukene lwemikhiqizo ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende ezihlanganisa ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q&A. Ungathola okwengeziwe mayelana nomatilasi osekela umkhiqizo wethu omusha kanye nenkampani yethu ngokuxhumana nathi ngokuqondile.Umkhiqizo awunabungozi. Ayiqukethe izinsalela zamakhemikhali ayingozi njenge-dyestuff, i-ejenti yokulungisa umbala, nama-anti-bacterial agents.